Unoziva here vanopfuura mamirioni e3.03 vana muUnited States vanga vatapukirwa neworona coronavirus. Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi. | Jesson
Unoziva here vanopfuura mamirioni e3.03 vana muUnited States vanga vatapukirwa neworona coronavirus. Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi.
1. [bank of America] Kukadzi fund fund maneja ongororo yakaratidza kuti kugoverwa kwemasheya uye zvinhu zvakasvika padanho repamusoro kubva muna Kukadzi 2011. Mari yemaneja yeFund yakadzika kusvika pa3,8 muzana, yakadzika kwazvo kubva "kutya" kusati kwatanga muna Kurume 2013.
2. DRM Budget Hofisi: mumakore makumi matatu 'nguva, mutoro wechikwereti weUnited States unozopeta zvakapetwa pagore hupfumi hwayo. Pakazosvika 2051, chikwereti cheveruzhinji cheAmerica chichava 202% yeGDP, ingangoita zvakapetwa pazero razvino. Kekutanga kubva Hondo Yenyika II, chikwereti cheUnited States chakapfuura 100% yeGDP gore rapfuura, uye ramangwana chikwereti cheUnited States chinotarisirwa kutyora nhoroondo yaro.
3. World Health Organisation: iyo yegumi nembiri uye yegumi nematanhatu Ebola kuputika kwakaitika muDemocratic Republic of the Congo (DRC). Kufananidza kwehutachiona hweEbola yemuno kwave kuitiswa kuti uone kana kumuka kuri nekuda kwezviitiko zvingangoitika kana kutapurirana kutsva-kumunhu. Misa yekudzivirira inoenderana nehurumende uye kuwanikwa kwejekiseni. Yambiro yakapihwa kunyika nhanhatu dzakakomberedza senge Sierra Leone neLiberia kuti vaone zvingangoitika.
4. Vezvenhau veAmerica: zvinoenderana nedata rekuongorora rakaburitswa neAmerican Academy of Pediatrics, kubva muna Kukadzi 11, vana vanopfuura mamirioni e3.03 muUnited States vakatapukirwa neworona coronavirus, vachiverengera ingangoita 13% yehuwandu hwenyaya dzakasimbiswa. ne COVID-19 muUnited States. Svondo rapfuura chete, huwandu hwevana vakatapukirwa neworona coronavirus yaive zviuru makumi mapfumbamwe.
5. Institute of International Finance: muna 2020, chirwere cheCOVID-19 chakawedzera chikwereti chepasi rose neUS $ 24 trillion kuchikwereti US $ 281 trillion, ine chikwereti chepasi rose-ku-GDP chiyero chinopfuura 355%. Zvirongwa zvakatsigirwa nehurumende zvakapa hafu yekuwedzera, nekambani yepasi rose, bhangi uye chikwereti chemhuri zvichikwira neUS $ 5.4 trillion, US $ 3.9 trillion uye US $ 2.6 trillion, zvichiteerana
6. Secretary of State weLincoln Lincoln akaudza UN Security Council kuti United States ichabhadhara mari inodarika mamirioni mazana maviri emadhora eku US kuva nhengo dzeWorld Health Organisation kupera kwemwedzi uno. "Izvi zvinoratidza kuzvipira kwedu kwazvino kuWorld Health Organisation (WHO) kuona kuti WHO inowana rutsigiro rwakakodzera mukutungamira kupindura kwepasi rose kuchirwere cheCOVID-19, uye tiri kushandawo kugadzirisa World Health Organisation (WHO) remangwana , ”Blinken akadaro. "
7.Brazil: Mushonga weChina weSinopec COVID-19 wakaedzwa kuti ubatsire kurwisa mutant novel koronavirus kubva kuUnited Kingdom nekuSouth Africa. Musi wa17 Kukadzi, iyo Butantan Institute yakatanga chirongwa chakakura chekubaya nhomba chakanangana nevanhu vese vakuru uye kuyedza kuti yakadzora huwandu hwehutachiona. Nekuda kwekushandiswa kwetekinoroji isingashandi, mushonga wakagadzirwa neChina Sayenzi neTekinoroji unotarisirwa kuve nemukana pane mamwe majekiseni.